Jareeto Gawaarida Bacriminta Mashiinka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal waa qalab muhiim ah oo isku dhafan oo ah khadka soo saarista bacriminta. Waxaa lagu gartaa hufnaan sare, heer sare oo isku mid ah, isuduwaha culeyska sare, isticmaalka tamarta oo hooseeya iyo wasakhda oo hooseysa.
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Horizontal?
Ku Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal waxay leedahay wiish dhexe oo leh garbaha xaglo qaabab kala duwan oo u eg xargaha birta lagu duuduubay usheeda dhexe, waxayna awood u leedahay inay u dhaqaaqdo jihooyin kala duwan isla waqti isku mid ah, iyadoo la hubinayo in dhamaan maaddooyinka la isku daray. Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal waxay la aadi kartaa qalabka kale ee kaabayaasha ah sida xambaaraha suunka ama qalabka suunka u janjeedha khadka dhan ee wax soo saarka bacriminta.
Waa maxay Mashiinka Bacriminta Horizontal loo adeegsadaa?
Isku qasiddu waa mid ka mid ah hawlgallada muhiimka u ah qadka wax soo saarka bacriminta oo dhan. Oo waaMashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal loo tixgeliyey inay yihiin qalabka aasaasiga ah ee wax ku oolka ah ee isku-darka gunta qallalan, budada iyo waxyaabo kale oo lagu daro Mashiinka bacriminta jiifka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qaso maaddada si wanaagsan hal ama in ka badan oo ah qalab caawiyayaal ah ama waxyaabo kale oo lagu daro geedi socodka soo saarista bacriminta budada ama habka wax soo saarka bacriminta pellet-ka.
Codsiga Mashiinka Mashiinka Mashiinka Horizontal
Ku Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal waxaa si weyn loogu isticmaalaa waxyaabaha adag ee adag (budada ah) iyo dareeraha adag (walxaha budada ah & walxaha dareeraha ah) ee isku dhexjirta aaga warshadaha bacriminta, warshadaha kiimikada, farmashiyaha, warshadaha cuntada, iwm.
Faa'iidooyinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal
(1) Firfircoon oo sareeya: U rog rogo gadaal una tuuro walxaha xaglo kala duwan;
(2) Midaysnaan sare: Naqshad iswaafajin iyo fallaadhihii wareegsanaa ayaa lagu buuxiyaa buunshaha, isku-darka isku ekaanshaha illaa 99%;
(3) Haraaga hoose: Keliya farqiga yar ee u dhexeeya fallaadha iyo gidaarka, nooca furitaanka ee nooca u furan;
(4) Naqshadeynta gaarka ah ee mishiinka ayaa sidoo kale jebin kara waxyaabo waaweyn;
(5) Muuqaal wanaagsan: Weld buuxa iyo geeddi-socodka nadiifinta qashinka.
Muuqaalka Muuqaalka Mashiinka Bacriminta Horizontal
Xulka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Horizontal
Kuwa badan baa jira Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal moodooyinka, kuwaas oo la soo xulan karo loona habeyn karo iyadoo loo eegayo baahida loo qabo soo saar isticmaale. Xuduudaha farsamo ee ugu muhiimsan waxaa lagu muujiyey jadwalka hoose:
Hore: Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad
Xiga: Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Hordhac Waa maxay Qalabka Beerista Noocyada Forklift? Qalabka Bacriminta Nooca Forklift waa mashiin rogaya oo afar-mid ah oo isku dhafan oo uruuriya rogista, kala-wareejinta, jajabinta iyo isku darka. Waxaa lagu shaqeyn karaa hawada furan iyo aqoon isweydaarsiga sidoo kale. ...
Rotary Single silsilad qalajinta Mashiinka bacriminta ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder? Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Silinda waa mashiin waxsoosaar ballaaran oo loo isticmaalo in lagu qalajiyo qaybaha bacriminta ee warshadaha samaynta bacriminta. Waa mid ka mid ah qalabka muhiimka ah. Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Silinda waa inuu ku qalajiyo walxaha bacriminta dabiiciga ah ee leh ...
Hordhac Muxuu yahay Wareegtada Suumanka Xagasha Weyn ee Weyn Wareegyadan Balaaran ee Xaglaha Qaloocan waxay aad ugu habboon tahay boodhadhka badeecadaha bilaashka ah ee cuntada, beeraha, dawooyinka, qurxinta, warshadaha kiimikada, sida cuntooyinka fudud, cuntooyinka barafaysan, khudradda, khudradda, khudradda, kiimikooyinka iyo wixii kale. ..